Canada oo Hal Malyan oo qaxooti ah u oggolaanaysa dalkeeda – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Canada oo Hal Malyan oo qaxooti ah u oggolaanaysa dalkeeda
By Ciise Cabdi Ciise on January 12, 2019 No Comment
Sabti, Janaayo, 12, 2019,(HNN) Baarlamaanka dalka Canada ayaa ansixiyay in loo oggolaado soo galooti ka badan hal malyan oo ruux inay yimaadaan wadankeeda saddexda sano ee soo socota.
Tiradan oo ah ku dhowaad boqolkiiba hal dadka ku nool wadanka Canada ayaa dad kabadan 286,000 waxa ay dowlada Canada siisay sharci sanadkii 2017ka waxaana la filayaa in dad gaaraya 350,000 ay sharci degenaansho helaan sanadkan.
“Waan u mahadcelinaynaa tirada dadka badan ee soo galootiga ah ee dalkeena imanaya, waxayna taas ka dhigtey wadankeena inuu noqdo mid awood leh oo aan ku faraxno.”ayuu yiri Axmed Xuseen oo ah Wasiirka u qaabilsan soo galootiga iyo qaxootiga dalka Canada.
Axmed Xuseen oo laftiisa qaxootinimo ku tegey dalka Canada asalkiisuna yahay Somali ayaa aaminsan in dadka badan ee imanaya dalka Canada ay gacan ka geysanayaan horumarka wadankaas oo dadkiisu sii gaboobayaan isla markaana ay hoos u dhacday carruurta ku dhalaynaysa wadankaas.
Mowqifka ay qaadatay dalka Canada ayaa ah mid aad ugaga duwan tan dowlada Maraykanka iyo inta badan wadamada reer galbeedka oo haatan albaabada ka xirtey soo galootiga u badan kuwa ka soo cararaya qaarada Afrika iyo wadamo kale.
Dalka Canada ayaa ogolaaday in uu qaxootinimo siiyo gabar u dhalatay dalka Sacudi Carabiya Rahaf al Qanun oo waalidkeed ka soo carartay laguna qabtay magaalada Bangkok ee dalka Thailand.
Canada oo Hal Malyan oo qaxooti ah u oggolaanaysa dalkeeda added by Ciise Cabdi Ciise on January 12, 2019